Voninkazo lohataona: toetra sy ohatra | Green Renewable
Misy zavamaniry maro izay manomboka mamony amin'ny lohataona ary mameno ny zaridaina sy ny valan-javaboahary an-tanàn-dehibe miaraka amin'ny loko sy hanitra. ny voninkazo lohataona Tena manaitra izy ireo ary mampiditra olona maro hanomboka ny tontolon'ny zaridaina. Ny haingo tsara indrindra dia atao amin'ity vanim-potoana ity hatramin'ny volana mafana sy mahafinaritra indrindra ho an'ireo zavamaniry ireo.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra rehetra ary iza amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny voninkazo lohataona.
1 voninkazo lohataona
1.4 Voninkazo lohataona: hyacint
1.6 Fetin'i Moor
2 Voninkazo lohataona: begonia
2.3 Voninkazo lohataona: lisy
Ity voninkazo ity dia avy amin'ny zavamaniry ahitra maharitra ela izay avy amin'ny faritra antonony any Azia sy Eropa. Fantatra amin'ny fampiasana azy ho haingon-trano noho ny voninkazo mampiseho azy. Ireo voninkazo ireo dia samy manana loko isan-karazany eo amin'ny volomparasy, manga na fotsy. Ny zavatra manaitra indrindra amin'ity zavamaniry ity dia ny famoahana voninkazo marobe ary manana endrika haingon-tarehy tokoa izy ireo.
Raha karakaraina amin'ny toe-javatra tsara dia afaka mahatratra mihoatra ny metatra ny haavony sy ny voninkazo isan-taona mandritra ny vanim-potoanan'ny lohataona. Ny tombony ananan'io zavamaniry io amin'ny hafa dia ny fampiasana fanafody azy. Na izany aza tsy soso-kevitra ny handany azy amin'ny fatra ambony satria mety hampidi-doza ho an'ny vatana izany.
Ny anarany siantifika dia petunia hybrida ary izy io dia iray amin'ireo zavamaniry ampiasaina indrindra amin'ny voninkazo lohataona. Mora tokoa ny hikarakarana azy, satria tena zavamaniry any izy io. Midika izany fa tsy mila fitandremana akory ny fikolokoloana sy fivoarany marina. Ny antso an'ity zavamaniry ity dia hoe mamokatra voninkazo lehibe sy tsara tarehy. Izy ireo dia miendrika trompetra ary manana loko isan-karazany sy tonony.
Ao anatin'ny vondrona anemon dia mahita karazana zavamaniry manana karazana 120 eo ho eo izahay. Matetika izy ireo dia mahatohitra tsara ny toe-piainana ratsy ary manana endrika mitovy amin'ny poppy sy daisy hafa. Ampiasaina betsaka izy ireo ny haingon-trano sy ny famoronana tontolon'ny natiora tsara tarehy. Avy any Japon ny fiaviany ary mamony mandritra ny lohataona izy, na dia any amin'ireo toerana misy toetrandro mafana aza dia afaka mamony mandritra ny tapany tsara amin'ny taona iray manontolo izy io.
Tsy maintsy raisina fa raha mila mari-pana ambony ity zavamaniry ity dia afaka manome azy io moramora kokoa ny toetrandro mafana. Ireo voninkazo lohataona ireo dia nanjary tandindon'ny fitiavana mahery vaika sy marefo.
Voninkazo lohataona: hyacint
Ny hyacinth dia iray amin'ireo zavamaniry izay manolotra voninkazo manitra sy tena mampiseho fatratra. Misy loko tsy mitovy amin'ny mavokely, mavo, volomparasy na fotsy. Misy karazana hyacint isan-karazany ary zavamaniry miboiboika avokoa izy rehetra. Mifanohitra amin'izay mitranga amin'ny ankamaroan'ny voninkazo lohataona, dia voninkazo iray izay tsy mila hazavana be loatra. Ny toerana ahafahanao mampivelatra ny ankamaroan'ny voninkazo dia amin'ny toerana toy ny antonony. Izany dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo voninkazo anaty trano malaza indrindra.
Izy ireo dia an'ny vondrona voninkazo lohataona izay mitovy amin'ny raozy amin'ny endriny. Ny felam-boninkazo dia divay ary malama kokoa noho ny raozy saingy mitovy endrika amin'ny ankapobeny ny endrik'izy ireo. Manana loko isan-karazany izy manomboka amin'ny fotsy sy mavokely hatramin'ny mena, volomboasary na volomparasy. Ny zavatra manaitra amin'ity zavamaniry ity dia ny voninkazo manova endrika pastel iray, voninkazo firavaka tokoa izy ireo ary matetika ampiasaina amin'ny fehezam-boninkazo.
Zavamaniry teraka any Mexico izy ary fantatra fa manana voninkazo lehibe. Miloko volomboasary izy ary misy alokaloka isan-karazany. Ny anarany siantifika dia Tagetes erecta. Mila toetrandro mafana sy rano be dia be izy io mba hitazomana ny voninkazo ho tsara toetra sy mahia ny tahony. Tsy manohana ny hatsiaka tara izay matetika mitranga mandritra ny vanim-potoanan'ny lohataona.
Voninkazo lohataona: begonia
Begonia dia iray amin'ireo voninkazo izay ilaina hananana ao an-trano sy handravahana mandritra ny vanim-potoana mafana kokoa. Misy karazana begonias mihoatra ny 1.000 ary izy rehetra dia samy zanaky ny tropika sy ny subtropika any Amerika, Azia ary Afrika. Ny begonia ampiasaina matetika ary ny be mpitady indrindra dia ny Begonia elatior. Matetika izy io dia ampiasain'ny mpamboly tanety, mpampiala voly ary zaridaina. Ny hakanton'ireo zavamaniry ireo dia ny famokarany voninkazo izay be olona ambonin'ny ravina zavamaniry ary misy loko mazava miparitaka amin'ny loko maro karazana.
Mamelana izy ireo mandritra ny fotoanan'ny lohataona ary azonao atao ny mitazona ny voninkazo mandritra ny taona, raha toa ka mitandrina izany ho toy ny fikarakarana tena hentitra ianao. Matetika izy io dia raisina ho zavamaniry isan-taona na dia zavamaniry maharitra ela aza.
Izy io dia iray amin'ireo zavamaniry manitra indrindra ary manana ny fiaviany any amin'ny faritr'i Mediterane. Ny anarany siantifika dia Marigold officinalis ary zavamaniry manana toetra mampiavaka azy io. Ny voninkazo dia manana loko mamirapiratra sy loko manga. Izy io dia afaka mamony na amin'ny faramparan'ny lohataona na amin'ny fiandohan'ny fahavaratra. Izy ireo dia tsy ampiasaina ho voninkazo haingon-trano fotsiny, fa azo ampiasaina koa ao an-dakozia ho solon'ny safrona.
Izy io dia iray amin'ireo voninkazo haingo malaza indrindra eto an-tany. Ary izany no izy hatsarana tsy mampino amin'ny voninkazo miloko mena, volomboasary na fotsy mihitsy aza. Izy io dia iray amin'ireo voninkazo lohataona fanta-daza, tsy noho ny hatsarany ihany, fa noho ny fikasohany koa. Ary izy io dia manana fikitihana velvety izay mahafinaritra tokoa ny manohina. Mivelatra mankany amin'ny lohataona na amin'ny faramparan'ny lohataona izy, miankina amin'ny mari-pana eo amin'ny fotoana rehetra.
Voninkazo lohataona: lisy
Farany, ny lisy dia iray amin'ireo zavamaniry voninkazo malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Fantatra amin'ny anarana lisy koa izany. Izy io dia karazan-java-maniry maitso sy maitso ary nanjary be mpitia noho ny fisehoan'ny voninkazo. Miankina amin'ny loko sy ny karazany, voninkazo lehibe ireo izay mamela hanitra mahafinaritra ho an'ny manodidina rehetra.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ireo voninkazo lohataona malaza indrindra ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » voninkazo lohataona